Dawo, daweyn iyo saami qaadid - Krisinformation.se
TB12 Läkemedel So
Waxaan halkan ku ururinnay macluumaad ku aaddan waxa khuseeya dawooyinka, daweynta iyo saami qaadidda.
Waqtiga iminka ah ma jiraan wax tallaallo ah ama dawo la oggolyahay oo ka dhan ah covid-19. Hey’adda dawooyinku waxay iskaashi la leedahay hey’adaha kale ee dawooyinka ee Yurub iyo caalamka intiisa kale si looga fogaado in dawooyin kala duduwan wax lagu daweeyo, iyo si gacan looga geysto dadaalka loogu jiro in tallaal loo helo cudurka.
Maadaama uu cudurku gebi ahaanba cusubyahay waxaa muhiim ah in la ururiyo aqoon ku aaddan sida covid-19 uu u saameyo dawooyinka kale ee wax lagu daweeyo. Hey’adda dawooyinku waxay sidaas darteed laamaha caafimaadka iyo bukaannada ku boorrineysaa in ay soo sheegaan dhinaca-waxyeellada ee la tuhunsanyahay, iyagoo adeegsanaya foom.
Hey’adda caafimaadka bulshada waxay xukuumaddu u xil saartay in ay soo saaraan istiraatiijiyad qaran oo dad badan saami looga qaadayo si looga baaro covid-19. Kuwa mudnaanta loo siinayo in laga qaado saami waa bukaannada laamaha caafimaadka ag yaal, dadka deggan hoyga iyo rugaha dadka da’da ah, waxaa kaalinta labaad soo gelaya shaqaalaha laamaha caafimaadka- iyo daryeelka, kaalinta seddaxaadna waxaa soo gelaya dadka ka shaqeeya hawlaha bulshada muhiimka u ah.
Ulajeeddadu, hor iyo horraan, waa in kor loo qaado awoodda saami qaadidda ee ku aaddan infekshinka socda ee covid-19 iyo in gadaal dambe, marka dad badan oo bulshada ka mid ah uu infekshinku ku dhacyo, la kordhiyo baaritaannada ku aaddan unugyada difaaca cudurka (tijaabooyin lagu eegayo difaaca uu jirku cudurkan u leeyahay) halkaas oo laga arki karo haddii uu qofka horay ugu dhacyay covid-19. Sida ay qabto Hey’adda caafimaadka bulshadu waxaa socda hawlo lagu soo saarayo tijaabooyin lagu eegayo difaaca uu jirku cudurkan u leeyahay, waxaana hor iyo horraan, marka ay tijaabooyinkaas diyaar noqdaan, mudnaanta la siin doonaa shaqaalaha laamaha caafimaadka iyo daryeelka.
Dhammaan dadka uu hargabku hayo ama leh calaamado duray u eg waa in ay guriga joogaan si aysan khatar u gelin in ay dad kale ku sii faafiyaan cudurka. Kooxdan saami-qaadidda mudnaan laguma siinayo.
Publicerades 4 maj 2020 13:21